Miracast - kuyini? isignali abezindaba wireless ukuthumela
Eliphezulu multimedia engenantambo-signal yobuchopho idivayisi ethile devaysa (TV, wokudlala, umdlali ukusakaza, njll ...) - Ngilokho obangela Miracast eside lokhu. Lokhu ubuchwepheshe kuyinto esisemthethweni emakethe yokusabela kuya "avaliwe" imikhiqizo bokusungula Apple futhi Intel, lokhu okusho ukuthi, ifa izimiso ka-AirPlay futhi WiDi, kodwa ingaphansi algorithm ukuhluka sokusebenza. Njengoba ngesisekelo indinganiso kuthathwe amathuba e-Wi-Fi Okuqondile. Ngakho-ke, ulwazi indlela kusuka isinikezeli abezindaba ukuba kukhawulwe amaphuzu amabili. Router-umlamuleli e inqubo translation ingabe akukuningi yini okuhilelekile - umthumeli futhi isamukeli axhunyiwe ngqo.
Miracast. Kuyini kulesi simangaliso?
Ilungelo akhethekile lokuhweba (igama eligcwele sha - Wi-Fi Certified Miracast) inhlangano ine-Wi-Fi Alliance. Nokho, noma yimuphi logo ekhethekile noma nezifinyezo lo kophawu imikhiqizo ukusekela ubuchwepheshe alikho. Umbhalo «WiFi Miracast» livame kudivayisi, sengidlulile inqubo isitifiketi ngokuhambisana nezidingo plan Bonisa isivivinyo.
Injongo eyinhloko ukuthi zavela ngale ndlela :. "Ukuqinisekisa ekhishwa okuqukethwe kwabezindaba kusuka ukuqapha PC noma mobile Igajethi iboniswe kunodonga ngaphandle kokusebenzisa izintambo namanethiwekhi yangaphandle" Ngekugcizelela ikakhulukati ekuhlanganisweni izinga isignali eyamukelwe.
Namuhla umsebenzisi ngamunye "smart" devaysa (inqobo OS ukwesekwa Miracast ejwayelekile) Ungavumelanisa kudivayisi yabo nge-TV / umshini wokudlala amabhayisikobho isebenze ngesithombe ngezinga ngaphandle ukufakwa isofthiwe eyengeziwe.
Ngesisekelo eyisisekelo ubuchwepheshe - a algorithm obusebenzayo I-WiFi Eqondile: Miracast-adaptha ukuthi plugs yocezuningi iyunithi port-conjugate (uma olunikezwa 'nensimbi' ilungiselelo yangaphakathi), esikhundleni ingxenye inethiwekhi ekhaya futhi wakha ibhuloho nge Umsakazi okwesikhashana. Ngaphezu kwalokho, ITU-T H.264 isignali format lapha is akubone njengendlela bashintshisane amafayela, futhi njengoba indlela kokuthutha wemidiya capsule (schedule uthunyelwa futhi wathola ifomu njengoba kuyinto).
Ngesikhathi isethulo Miracast (kwenzeka ncamashi ngo-September 2012 - ngephutha: esikhathini esingaphansi kwezinyanga 2 ubuchwepheshe iye yamukelwa olusha uhlelo lokusebenza Android futhi, ngokufanelekile, isetjentiswe hhayi kuphela imikhiqizo ye-Google), kwakukhona abangaphezu kuka ayisihlanu ukulungiswa okusekelwe: 17 - Cea, 29 - UVesa, 12 - ucingo okuthiwa. Phakathi amazinga liyabonakala umsindo - ezimbili isiteshi LPCM, «Stereo 5.1» AC3 futhi ACC.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nenqubo uxhumano
Step by step kusebenze ongakhetha Miracast (kuba cishe ecacile kakade) kuhilela izinyathelo ezimbalwa. Kumelwe senze izinto ngendlela:
Vula PC / smartphone / "aphathwayo".
Vula idatha owamukelayo '(noma i-TV wesibuko ezethulo).
Yabela kokubili kumadivayisi elihambisana uhlelo esethiwe.
Khetha bese ukusebenzisa ifayela ethize ikumodi ikhophi, isikrini iboniswe owamukelayo qapha abezindaba.
UMlamuleli router e "izinkulumo" ngaleyo ndlela akusho iqhaza: amadivayisi amabili akha isiteshi ngqo ephephile phezu kamuva kwenzeka ukusakaza. Ngamagama alula, Miracast (kungcono isiqondiso zobuchwepheshe njengoba lomsebenzi nge izithombe namavidiyo ulwazi kuyoba ethandwa we bendabuko-HDMI esangweni, manje Akungabazeki) is isakhiwo esakhelwe phezu Wi-Fi Eqondile kamuva izinguqulo (3.50 nangaphezulu). Isetshenziswa H.264 isiqophi kokucindezelwa ivumela lokuphinda ikhophi esiqondile izakhi idatha kunoma yimiphi Isibonisi atypical, kuhlanganise esikrinini kwelivi.
Izinzuzo ukuthi obuzwiwa ngamunye
Ngisho umsebenzisi ongenalwazi engacabanganga ayeliqamba izizathu eziningana ukufuneka Miracast. Okokuqala, sikhuluma induduzo ezisebenza: ebonakalayo komunye nomunye "ngomsakazo", nge ukuhlonza kwenzeka indaba ngemizuzwana, kanye nokuxhumana - ngaphandle labalamuli (asikho isidingo ukuthenga yokuxhuma ikhebula). Okwesibili, esikhiphekayo-Miracast adaptha ngemishini ukuze ukulungiswa kungakhethwa lolutsite zedivayisi ayidingi - dongle umthumeli / receiver ngokwayo ibona ulwazi ingcaca. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuba usekelo 3D ku ngemuva lesibambiso ogcwele okuqukethwe ukusakaza.
Phakathi kwezinye izinzuzo:
ukuthandwa echazwe zokuxhumana ibhanela abakhiqizi umphakathi (izinkampani ezingaphezu kuka-500 bagxile ukuqaliswa kwe "mirror okusakaza");
kokubambezeleka obonakalayo signal processing (eziphansi imodeli amagajethi mthetho awasebenzi ngokugcwele);
kungenzeka ngokudlulisela "ezisinda" kangaka isiqophi (FullHD);
Ukunciphisa izinqubo ezengeziwe (ayifakiwe umthwalo ngokweqile phezu ibattery smartphone / tablet).
Miracast kanye nobuthaka bayo
Ngeshwa, amagama "ngaphandle amaphutha" cishe ingekho emhlabeni ephezulu intelligence ubuchwepheshe. Iqiniso ukuthi inguqulo yamanje ye-Miracast (Android, kumele wathi, nje omunye wokusebenza eziningi ezixhumene isiphetho sabo nale ejwayelekile, kodwa ingxenye yesikhumba mobile ukubusa kwalo akukho ukungabaza) kunephutha, kufakazelwa:
namanje kwedivayisi ababuthakathaka (ngezinye izikhathi isimo "uxhumano olulindelekile ..." ibonakala esikrinini, kodwa ukuqaphela ukusebenza futhi awukwazi ukuthola okunengqondo eyalandela);
ukusekela isinqumo esiphezulu ngesikhathi 1920x1200, ngenkathi ekhula ukufunwa 4K;
ukusetshenziswa nokuphathelene H.264 ngekhodekhi;
degree ezimba imikhiqizo ukumaska okukhona ku isofthiwe ibhodi, futhi "hardware" ukuze lelisu ubuchwepheshe (akukho uphawu isembozo kanye / noma devaysa izindlu).
Futhi, abasebenzisi amaningi ukubona kusimo ukuthi uma usebenzisa Miracast-igajethi uvinjwa operation ezivamile Wi-Fi uxhumano. A adaptha 2-siteshi, njengoba sazi, akubona bonke anemisila Smartphones kanye amaphilisi (kusilela siyenzeka ngisho ingxenye iminikelo premium). Ekugcineni, Dynamics 30 FPS futhi 720x480 - izilimi amazinga nesizotha kakhulu namuhla, kodwa ababuthakathaka ngisho ngezinye izikhathi musa uthole ukuqonda ku ingxenye Isibonisi (ku kunodonga isiqophi iza jerks obonakalayo).
Analogs futhi ukungezwani kwawo ayisisekelo
Olusebenzisayo, a friendly-ekuhleni, wanga angamala Miracast, --Android (kusukela version 4.2 Jelly Bean), i-Windows 8.1 (kudeskithophu kumadivayisi eselula) kanye Amazons Fire. Njengoba for PC esekelwe Linux ke ngaphandle kokuphula sifinyelele ukuqashelwa okufanele ukuvumelanisa nge imikhiqizo certified ngeke aphumelele. Nokho, Huck igcwele ukwehluleka futhi ayikwazi ukuqinisekisa inkhulumomphendvulwano evamile phakathi umthumeli kanye umamukeli abezindaba kokuqukethwe. Abameleli beNdikimba ububanzi Apple awazange aqonde Miracast, njengoba "bavalelwa" ngaphansi yasekuqaleni platform ubuchwepheshe AirPlay.
Ngokulinganiswa Intel WiDi kungashiwo ukuthi uxhumano standard isikhathi eside, u isebangeni ihlale iyimpahla yomthengi igama elifanayo yi corporation kanye ayitholakalanga for zobuchwepheshe nge izilimi third-party. Kodwa lapho kukhululwa inguqulo 3.5 imayelana ukushintsha ngokuphelele.
kumakhophi Wired ezimbili kuphela - MHL futhi yocezuningi. Of okusobala uzinake base ikhebula contact, engesiyo elula lapho ukuvumelanisa ingxenye, kodwa isitshengiselo ukuzinza nge ashukumisayo ukushintshanisa kwe-data (Miracast kakhulu "sags", lapho isikrini eyayembuleka isinyathelo-izigcawu).
Miracast emehlweni abakhiqizi
Nakuba ubuchwepheshe kanye ine ikhodi yomthombo ovulekile, algorithm yayo wireless ukudlulisa isithombe ngokuyinhloko igxile bezikhali-Windows ne-Android. Akumangazi ukuthi uhlu abakhiqizi ekhuphuka nge izikhathi, eziningana izikhundla, anamakhulu mane. Yiqiniso, kunokuningi okungakhulunywanga ngakho futhi uhlelo ezingemnandi eziphathelene isibuyekezo ukuphathwa igobolondo. Ngakho, ngokukhethekile, awuzange kusekelwa Miracast-Windows 7 (kanye inkinga ingaxazululwa noma nge umhlangano we-copyright noma ukufakwa software asizayo).
The brand liyabonakala kakhulu, ukubonwa "othandweni" I-Wi-Fi Eqondile futhi H.264:
Esiseduze esizayo ne Miracast isikhundla
Umqondo wokusungula yocezuningi engenantambo Yiqiniso, ezithakazelisayo. Nokho, ukubonisa ulwazi esikrinini omkhulu kusukela smartphone yakho noma ithebhulethi akunzima kangako. Lapho enzima - ukuthola ehloniphekile okunye yezifiso Smarts. Futhi kulesi sici, Miracast is nje ngeke ngokushelela.
Ngaphandle izimbangi ngqo - AirPlay ne-Chromecast - aziphathe izikhathi ezithile kakhulu "ngobuchule". Ngokwesibonelo, ukuba uthumele okuqukethwe kwevidiyo esikrinini esikhulu ngenkathi siwele ngokusebenzisa imenyu (ngaphandle kokuveza imininingwane efanayo ekusakazeni ngocansi). imininingwane ehilelekile Okwesibili ezingemnandi kuziwa ukudlala imodi - Miracast ngokuvamile udlala ividiyo kuze kube sekupheleni, hhayi ukusabela noma inzwa noma inzwa umyalo isikhundla / ukunyakaza umthombo devaysa (conjugation umnyuziki elithenjiswe firmware elisha, bese "elele" smartphone ifunda ukuvala isikrini kwelivi ngaphandle ikhodi extra umsebenzisi).
Manje cishe ukufana nazo ubuchwepheshe DLNA. Miracast - a "indlela eqondile: ukusakaza" izithombe bukhoma "kusukela isihenqo ngegajethi qapha ezahlukene kwenzeka ku-algorithm emfushane ngaphandle ISIZINDA ezengeziwe zokuxhumana. Ngaphansi DLNA isifinyezo efihla wonke amazinga inhlanganisela raznosortnyh. Okungukuthi amadivayisi wokusungula ekuqondisisaneni kudinga khona "umhumushi" (umzila). Futhi, abahlanganyeli Digital Living Network Alliance ungakwazi kuphela usebenze amafayela, futhi ezimbili "umngane" Miracast umsebenzi esibukweni isimiso ( "ukuthi show, welani"), futhi ekuxazululeni nobunzima ethile yezobuchwepheshe ungakwazi ukwabelana ngokuqukethwe e ukuvumelanisa elikhulu.
Software Miracast kwedivayisi: Windows-nguqulo
On the onamakhasi Microsoft liqukethe ulwazi mayelana nemibandela yokusebenza edingekayo lapho kungenzeka ukwethula iqoqo obusebenzayo Miracast ubuchwepheshe.
Windows 8.1 - olufakwe noma abuyekeziwe ne "ngasikhombisa" - eyenani izimfuneko ubuncane. Ngaphezu kwalokho, isimemezelo nokusebenza okujwayelekile kuya enguqulweni ukusakaza RT 8.1 futhi kamuva OS yesifunda.
ikhompyutha / Igajethi belungiselela engenantambo Broadcasting okuqukethwe ku qapha
Amadivayisi nge "eziyisishiyagalombili" ebhodini uhlu lezinyathelo ukuqinisekisa inqubo yokusakaza yangempela amaphuzu amabili:
amadivaysi Ukuvumelanisa (Transmitter kanye umamukeli) eziqukethwe endaweni isignali Ukusabalala.
Ukuqalisa "Projector" okukhethwa kukho.
Futhi kukhona zimo eziningana okukhipha okuqukethwe. Isithombe / ividiyo, unga:
ukusakaza imodi impinda (ukubonisa kanyekanye 2 ubonisa);
ngeso lengqondo kuphela ukuqapha we-apharathasi eyamukelayo;
ukudlulisa ngokuhudula izinto wayefisa kwesikrini ukuze isikrini.
Miracast ne-Android uhlelo lokusebenza
electronics abakhiqizi abaningi ozama ukwenza iningi Miracast ubuchwepheshe. I-LG, isibonelo, luhlanganisa ke in Smartphones kanye nemisakazo has iminyaka eminingi. Musa zisale ngemuva futhi Sony onjiniyela, Samsung, Panasonic - nomaphi lapho isebenza Android omdala kunawe 4.2, le ndinganiso luyasetshenziswa, njengoba besho, ukuze afike ekugcineni.
Isidingo ukudluliswa ukhululekile okuqukethwe kuye kwaholela yokuthi asekele Miracast behlakaniphe labo onobuhle TV okuyinto wehla yokwakha izimoto eziningi kuze 2012. isixazululo Technical baba-HDMI eqondene okhiye (isignali adapters). Okwamanje, basuke benza e yokukhiqiza eziningi izinkampani ezahlukene. Ngenxa yalokho, imikhiqizo eza emakethe, futhi sina kuhluke intengo nekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, endaweni ukuba kanye ukungalingani obusebenzayo: eyodwa adaptha ukuze amandla ukwakha "amabhuloho 'ngaphakathi Miracast ejwayelekile, omunye akubizi lutho ukuthola" esivumelana ngakho "Apple devaysa noma ukusungula" inkhulumomphendvulwano "phezu DLNA. Yingakho ngaphambi kokuthenga kubaluleke kangaka peruse izinkundla thematic futhi uvakashele amasayithi esemthethweni abakhiqizi.
Ekuhlaziyeni dongle ethandwa kakhulu
ku Miracast Dongle amanani ziyehluka uhla 30-100 cu. Emva kokuthengwa ukufakwa kwe-adaptha sanoma yisiphi TV ifakwe i-HDMI port, kungenziwa exhunywe imishini kwentambo. Sikhuluma ukuxhumeka okuqondile elikuvumela ukudlala "omkhulu" isiqophi e 1920x1200 format.
Dongle Mocreo (.. 30-35 cu) - ukwesekwa yibhange yezifiso ezintathu: Miracast, AirPlay futhi DLNA.
"Izihluthulelo" brand nenhlwatsi (70-80 at. E.), Ngokuvamile bayaziqaphela izindinganiso ezifanayo njengoba Mocreo.
Adaptha GeekBuying (50-60 cu ..) - ihlinzeka esibukweni ukusakaza ku-algorithm Miracast futhi DNLA.
Ngaphezu kwalokho, kukhona dongle ayatholakala emakhemisi futhi original-Wi-Fi Certified Miracast, ayalolongwa ngaphansi omunye uhlobo isignali.
Indlela elula izinwele ngaphandle ayina, nokuthi zizosebenza?